မြန်မာ အစိုးရ ၀ါကာ အူဒင် ကို တရားစွဲဆို မည် | Freedom News Group
by FNG on July 28, 2012	HKT၊ ၊အမေရိကန် တွင် နေထိုင်သည့် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ၀ါကာ
က FNG ကို ပြောသည်။ FNG Exclucsive
From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← အကြိမ် ၃၀ မြောက် နွေရာသီ အိုလံပစ် ပွဲတော် ကို လန်ဒန် မှာ ဖွင့်လှစ်
ဘ၀ ဆိုတာ သေဆုံးခြင်း →
George Than Setkyar Heine	#
Let this ‘GUY’ swing from the nearest lamppost I say.
He is A TERRORIST at HEART and in PRACTICE as well no doubt.
This guy should be givenaLESSON he well DESERVES as well.
Make it happen Thein Sein and you will REDEEM your PLACE in HISTORY I promise.
Again, ROHINGYAS are NO NATIVES of BURMA other than FENCE JUMPERS since day one until today I say.
UNITY IS STRENGTH lest Arakans and all other ethnic people in Burma forget!
August 3, 2012	Naymyo Nwae	#
August 2, 2012	mgoo	#
August 1, 2012	Argar	#
မောင်တောမှ သတင်းမှားများလုပ်ကြံဖန်တီးပြီး ၀ါကာအူဒင်ထံသို့ သတင်းပို့နေသော ၀ါကာအူဒင်နှင့်
အစွန်းရောက်ဘင်္ဂလီကုလားတွေကို မောင်တောမှာလည်း ဖမ်းဆီးတရားစွဲရမယ်။
July 30, 2012	saw Hla khine	#
Go away Bengali rohingya. Go to another world. we don’t want to see anylonger. Back off from Myanmar country. Be careful Burma campagn, wai nyin ka la ma and Bengala leader. Never come back to Burma. What the hell of your educational level? You are growing up in Burma.Very stupid people. Never try to becomeamusilim country.
July 30, 2012	min ko ko	#
သမ္မတကြီးက ပြောတယ်..။ မြေးအဆင့်မျိုးဆက်တွေကိုသာ နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံမယ်လို့ပြောတယ်..။ ဥပဒေကလဲ ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့..။ ဒါပေမယ့်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်နေရာကို သွားလိုက် သွားလိုက် ဘင်္ဂါလီအနွယ်အဆက်တွေလို့ ပြောလို့ရတဲ့ လူတွေချည်းပဲ တွေ့နေရတယ်..။ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနဲ့အတူ ပြည်တွင်းမှာ အရမ်းများလွန်နေတဲ့ သူတို့ကိုရော ဘယ်လို စီစစ်မလဲ..။ အရေးကြီးပါတယ်..။
July 30, 2012	zaw moe naing	#
ဒီတရားစွဲမှုကိုမဖြစ် ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ …..အောင်မြင်အောင်ဆုတောင်းပေးနေမယ်…..
July 30, 2012	Zero	#
တရားစွဲမယ်ဆိုရင် England မှ Burma Campaign က Mark Farmanar ,Anna Jones ,ဝေနှင်းပွင့်သုန် ရယ် England ကရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ထွန်းခင် ကိုပါတရားစွဲ ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးစေချင်ပါသည်……
July 30, 2012	SZ	#
Very good news, Yes that isagood legal approach to start. How about Htun Khin of BROUK?
July 29, 2012	့honey	#
July 29, 2012	Aung Gree	#
July 29, 2012	SOS Myanmar	#
၀ါကာ အူဒင် ကိုတရား မစွဲတာ တောင် မြန်မာ အစိုးရ တစ်ခု ခု လုပ် ဖို့သင့် ပါတယ်။ သတိပေးတာ တို့ ၊ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အခြေအနေမှန်တွေကို လှီးလွဲပြော ဆို မှာ စတာ တွေ အတွက် သတင်း စာ ရှင်းလင်း ပွဲ လို မျိုး ဖြစ်ဖြစ်
July 29, 2012	mgshweyoe	#
Good we ever support u
July 29, 2012	Min Naing	#
funny like dar karlu yay…..
July 29, 2012	saif ali khan	#
rohingya organizations, like BROUK, are the children of islamic militancy like al-qaeda and talibans. the recent threats by indonesian and pakistani islamic terror outfits are proof enouth of this. for years we have been telling that rohingya is justaterror outfit of illegal bengalis in burma. many british christian organizations and other socalled burma campaigners always took side with the islamist militancy. now they all should be put on trial and legal actions should be taken against them.
July 29, 2012	Saw Sanda	#
July 28, 2012	Than Naing	#
GAVE THEM GOOD LESSONS!!!!!!
July 28, 2012	zawko	#
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အမြန်ဆုံးနဲ့ အပြီးတိုင် မောင်းထုတ်နိုင်ပါစေ…. ဒေါ်စုလည်း လမ်းခရီးမှာ ချောမွေ့ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ……….
July 28, 2012	thanlin	#
July 28, 2012	...အလင်းစက်များ	#
ဒါ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးလိမ်လည်တဲ့ အမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သွေးချောင်းစီးလူသတ်ပွဲတွေ ဖြစ်အောင် လှုံ့ ဆော်မှုဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဥပဒေနဲ့ လည်း မကိုက်ညီတဲ့အတွက် အမှုကိုသာ ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်ရင် နေစရာ မရှိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်သမား စိုးရိမ်ရတဲ့ အမေရိကားဟာ ဒီလိုလူမျိုးကို လက်ခံနိုင်စရာ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ အဆင်ပြေပါစေ။
July 28, 2012	same	#
ကောင်းတယ်။အပြတ်လုပ် ကမ္ဘာကို လိမ်တယ်ဆိုတာ ၀န်ခံခိုင်း ယုံနေတဲ့ ချီးဘရန်းတွေ သိအောင်လို့ကြေညာခိုင်းရမယ်
July 28, 2012	Pann Thazin	#
Very good. We’ve all been waiting for this news.
Best of luck for our government!!!!
မြန်မာ တွေ ဗမာတွေအော်ပြိး ဒိစကားက မှတိုင်းပြည်ကို ပို ချစ်တာပါ လို ယူဆပြိး ၂၃နှစ်လုံး ငြင်းနှီုက်သလောက်ငြင်း ထားတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဟောင်းများနဲ့ဂရိုနီ လူသားတွေ ဗမာ သာမှန်ရာ ၏ ဆိုတဲ့ ခေတ်သစ် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ဟုခေါ်ဆိုခံဘို့ ရာလွှတ်တော်ရင်ပြင်မှာ စင်မြင့်ဆောက်နေသူနှစ်ဖွဲ့ လုံး နုတ်ဆွံနေကျတာ စကားတခွန်းအတွက်သွေးပျက်နေကျတာ အကျည်းတန်လှပါတယ် သမ္မတရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ သတ္တိကြောင့်သာ ရခိုင်မြို့ လူမျိုး ပုည ဇာတိရှီနေနှီုင်တာ
ဆက်လုပ်ပါ ငွေလိုရင် အရပ်တကာ မောင်းထု အလှူခံပေးပါမယ် နောင် ၁၅နှစ်မှာ ရခိုင်ဓလေ့စရိုက်
ကို ပြတိုက်မှာဘဲကြည်ရတော့မဲ့ အဖြစ်မျိုး မကြုံ နှီုင်လိုပါ
July 28, 2012	rakhine thar	#
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,553,331 hits
abcnews.go.com/Business/wireS… 22 hours ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar releases 41 political prisonersMyanmar's surreal capital now less ofaghost townMyanmar frees 44 political prisonersSEA Games: Myanmar hosts international coming-out partyMyanmar's President Pardons Political PrisonersICRC advising police in MyanmarMyanmar frees political detaineesMyanmar's President Pardons 44 Political PrisonersWant Burma info in your inbox each morning?